burmese Archives - For Her Myanmar
စားပြီးသား ရေခဲချောင်းတုတ်ချောင်းလေးတွေကို မလွှတ်ပစ်လိုက်နဲ့နော်။ ဒါမျိုးလေးတွေ လုပ်လို့ရတယ်။👇👇👇 လက်မှုပညာ ဝါသနာပါတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် လွယ်ကူးရိုးရှင်းတဲ့ ခွက်အောက်ခံပြုလုပ်နည်းပါ။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်း ကိုယ့်အနီးအနားတစ်ဝိုက်က ပစ္စည်းလေးတွေပဲနော်။ လိုအပ်သည့်ပစ္စည်း (၁) ရေခဲချောင်းတုတ်ချောင်း…
ဒေါက်ဖိနပ်ကြောင့် နာကျင်မှုကို ဤနည်းလမ်းဖြင့်နှုတ်ဆက်ပါ။
ဒေါက်ဖိနပ် မစီးဘဲလည်း မနေနိုင် တစ်နေကုန် စီးပြီးသွားရင်လည်း ခြေထောက်တွေနာကျင်နေပါသလား??? ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းလေးကတော့..👇👇👇 အလှအပမက်တဲ့ မိန်မသားတို့အဖို့ ဒေါက်ဖိနပ်ဆိုတာ ရူးသွပ်စရာတစ်ခုပါ။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးလိုက်ရင် စမတ်ကျသွားသလို…
အို သူရယ်…..ဘာလို့အဲ့လောက်တောင် ကျွန်မကိုဆွဲဆောင်နိုင်ရတာလဲကွယ်…???? သူ့ကိုလေ…နေ့တိုင်း မကြည့်ဘဲနဲ့ကို မနေနိုင်ဘူး။သူ့ကို မကြည့်ရရင် တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ။ အိပ်ယာက နိုးတိုင်းလည်း အပြေးလေးသွား ကြည့်ရမှ ။ လမ်းသွားရင်လည်း သူ့အရိပ်အယောင်လေးတွေ့ရင်…